China Carbide Rotary Burr SE Shape -Oval Shape mpanamboatra sy mpamatsy |Xinhua
carbide rotary burrs SE endrika azo ampiasaina amin'ny herinaratra-powered sy pneumatically-powered fitaovana tanana mba hanapaka fitaovana toy ny aluminium, titane alloys, varahina, vy, varahina, zinc alloys, firaka steels, varahina, nikela, ary plastika isan-karazany, sns Ity fitaovana ity dia azo ampiasaina amin'ny fitaovana pneumatika sy elektrika isan-karazany.
●100% simenitra carbide virjiny ara-nofo antoka
●Fitaovana samihafa misy naoty carbide samihafa.
●Fitaovana avo lenta, mateza avo
●Fikarakarana avo lenta sy haingana.
●Teknolojia welding volafotsy avo lenta
Karazana baolina D D0303X03-35 3 13 3 38 X
A: Manana fepetra tsy tapaka amin'ny tahiry izahay, ary azo alefa ao anatin'ny telo andro aorian'ny fanamafisana ny fifanarahana.Ho an'ny vokatra sutomized, 25 andro.
F: Ahoana no hiantohanao ny kalitao?
A: manana serivisy fanaraha-maso azo antoka ho an'ny vokatra efa namidy izahay.Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala mifandray aminay.Hahazo serivisy mahafa-po aorian'ny varotra ianao ao anatin'ny 24 ora.
teo aloha: Carbide Rotary Burr SD endrika -Bola endrika
Manaraka: Carbide Rotary Burr SF Shape -Tree shape with Radius End